Tsy mahazo Afa-tsy 5 volana fanaovana asa fanompoana Fiarahamonina ilay lehilahy Breziliana iray voampanga amin’ny Trangàna fanaovana valifaty amin’ny lahatsary mamoafady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Janoary 2020 7:50 GMT
Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr Moyan Brenn. CC.BY – 2.0
Herintaona lasa izay, navelan’ i Fran, vehivavy Breziliana iray mpianatry ny Oniversite ny sipany, Sérgio Henrique Alves, haka azy an-dahatsary tamin'ny findainy raha toa ka ninono ny filahiany. Nanaparitaka ilay lahatsary tamin'ny Whatsapp ilay ranamana avy eo. Nampiakarina fitsarana ilay raharaha rehefa nivoaka nameno ny Aterineto Breziliana ny sary hatsikana nanala baraka an'i Fran, 22 taona.
Tamin'ity herinandro ity, nivoaka ihany ny didim-pitsarana nony farany. Voasazy hanao fanompoana ny fiarahamonina mandritra ny 5 volana i Sérgio. Satria moa tsy manana lalàna mifehy ny fanaovana valifaty amin'ny resaka vetaveta i Brezila, voampanga noho ny fanaratsiana sy fanalàmbaraka i Sérgio.
Nanimba tanteraka an'i Fran ilay fitsarana. Taorian'ny nampisavoritaka ambony ambany ny fiainany – very asa tao amin'ny trano fivarotana antsinjarany iray izy ary voatery nanajanona ny fianarany tany amin'ny Oniversite – heveriny fa tsy mifandanja amin'ny faharavana niainan'izy sy ny fianakaviany ilay sazy. Nilaza tamin'ny fantsona TV fandefasam-baovao, Globo, izy fa “nitsiky naneso azy” i Sérgio raha nandao ny fitsarana. Omaly, namoaka fijoroana vavolombelona izy tao amin'ny pejy Facebook “Apoio Fran” [Manampy an'i Fran] ary niantso ny olona mba hanampy amin'ny fanerena ny Kaongresy mba hanaiky lalàna iray hiatrehana manokana ny valifaty amin'ny resaka vetaveta.
Salama daholo! Te-hisaotra anareo rehetra amin'ny foko manontolo aho tamin'ny fanohananareo, izay tena zava-dehibe tamiko ary koa te-hilaza fa mbola tsy tapitra ny adintsika. Hatramin'ny voalohany, fantatro fa tsy hisy na inona na inona hanjo azy. Fa mbola maharitra ny fanantenana ary mijoro aho satria fantatro fa maro ireo vehivavy mety hiaina ny zavatra toy ny niainako. Hiady ho an'ny lalàna afaka miaro ireny iharam-boina ireny aho ary mba hifandaja amin'ny fahavoazana naterany ny sazy ampiharina amin'ireo nahavanon-doza. Tena ilaina ianareo mba hisian'izany! Vao maikna aho mila anareo ho eo anilako. Mila dika anaty Aterineto amin'ny lalàna Maria da Penha Law [Lalàna mifehy ny herisetra an-tokantrano] isika, na angamba “Lalàna Fran Santos” mihitsy ary mampanantena aho fa tsy hiraviravy tanana! Mety ho voaforona izany lalàna izany raha toa ka mahazo sonia 1% amin'ny mponina ato amin'ny firenena isika, izany hoe 1,36 tapitrisa. Aty amintsika ny Lalàmpanorenana! Fa mila mpahay lalàna ihany koa isika hanampy antsika. Aiza daholo ireny solombavambahoaka nilaza fa hanampy ahy ireny? Na amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa, hataontsika izany. Mety ho ela izany, fa vitantsika izany.
Sary avy ao amin'ny Pejy Facebook Apoio Fran. “Satria isika rehetra Fran avokoa, manohitra ny seksisma ho toy ny endrika hatsikana na ny resaka firaisana ho toy ny fady”
Namorona fanangonantsonia ho an'ny daholobe tao amin'ny tranonkala Petição Pública i Fran ho amin'ny famoronana lalàna iray vaovao. Amin'izao fotoana izao, 1220 sonia no azon'ilay fanangonantsonia. Milaza ihany koa izy fa hanenjika ilay nanao meloka taminy izy (satria efa vita izao ireo fanenjehana azy ara-pitsarana) noho ny fahavoazana ara-moraly sy materialy, satria tsy afaka nahita asa hafa izy hatramin'ny nisian'ilay tranga tamin'ny taona lasa. Nilaza tao amin'ny tranonkalam-baovao G1 izy hoe:
Nitady asa tany amin'ny toerana h afa maro aho. Fa rehefa mijery ny Taratasy mombamomba ahy izy ireo, rehefa mahita ny anarako ary ny toerany niasako taloha, tadidin'izy ireo ny zava-nitranga ary tsy miverina miantso ahy intsony avy eo.
Nanolotra volavolandalàna iray mametraka ny ho toy ny fandikandalàna ny fanaparitahana rakitra manokan'ny tena ilay mpilalao baolina kitra taloha ary mbola voafidy indray ho solombavambahoaka, Romário. Araka ilay tetikasa, mety ho voasazy ireo nahavanon-doza, hatramin'ny 3 taona an-tranomaizina ary tsy maintsy handoa onitra amin'ilay niharam-boina noho ny fahavoazana ara-materialy rehetra nateraky ny fifindràna trano, fahaverezana asa sy ireo fitsaboina ara-batana na ara-tsaina rehetra mety ho ilainy.